‘फेस एप’बाट बुढ्यौलीको रहर, तर कति सुरक्षित ?
काठमाडौं- सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर तथा इन्स्टाग्राममा अहिले ‘बुढो अनुहार’ देखाउनेको ट्रेण्ड चलेको छ।
नेपालमा मात्र होइन विश्वभरका सेलिब्रेटीहरुसमेत आफूलाई बुढोमा कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर एउटा एप प्रयोग गर्दै त्यस्ता तस्बिरहरु शेयर गरिरहेका छन्।
गुगलको प्ले स्टोर र आइफोनको एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने ‘फेस एप’ नामक फोटो एडिटर एपबाट आफ्नो बुढेसकालको अनुहार अहिले नै हेर्ने र देखाउने होड निकै चलेको देखिएको छ।
के हो फेस एप ?
‘फेस एप’ एउटा फोटो एडिटर एप हो। जसले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समार्फत् प्रयोगकर्ताले राखेको तस्बिरलाई उमेरअनुसार फेसको रुप बदलिदिन्छ। खासगरी अहिले युवाहरुले आफूलाई बुढेसकालमा कस्तो देखाउँछ भनेर यो एप प्रयोग गरेको देखिन्छ। रमाइलोका लागि यो एप बढी प्रयोग भएको छ।
पछिल्ला केही दिनयता देखिएको ट्रेण्डमा आफ्नो अनुहार बुढेसकालमा कस्तो देखिन्छ भन्नेबारे बढी ‘चेक’ गरिएको छ। यो एपमा भने विगतमा कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ र भविष्यमा कस्तो हुने छ भन्ने फिचरहरु राखिएको छ।
२ वर्षपछि चर्चित
फेस एप सन् २०१७ मै लञ्च भएर गुगल स्टोरमा राखिएको थियो। त्यतिबेला ‘सेलिब्रेटी’ हरुले प्रयोग नगरेपछि चर्चा कमै भएको थियो। यसपटक भने केही सेलिब्रेटीहरुले यो एप अचानक प्रयोग गरेपछि गुगलको प्ले स्टोर र आइफोनको एप स्टोरबाट धेरै डाउनलोड भएको छ।
फेस एपसँगै यसको प्राइभेसीलाई लिएर प्रश्नसमेत उठन थालेको छ। कयौं प्रयोगकर्ताहरुले यो एपले डाटा चोरिरहेको आशंका गरेका छन्। इन्टरनेटसम्बन्धी विज्ञहरुले उक्त एपले ग्यालरीमा भएका अन्य तस्बिरहरुलाई पनि आफ्नो ‘एक्सिस’ तानिरहेको भन्दै प्रयोग गर्दा ध्यान दिन जरुरी रहेको सुझाव दिएका छन्।
फेस एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्